मान्छेलाई जंगल पठाउने कविता- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
मान्छेलाई जंगल पठाउने कविता
पृथ्वीको दुस्मन को हो ? जवाफ ‘तङसिङ’ मा छ । कवि राजा पुनियानीले खोजी निकालेको भाषामा लालित्य त छँदै छ, प्राकृतिक–सांस्कृतिक भाष्य पनि छ ।
जेष्ठ २८, २०७९ मनोज बोगटी
हुन त यो क्लिसे भइसक्यो, तरै पनि विश्वमा अझै बहस हुन्छ– विचारधाराले साहित्य जन्माउँछ कि साहित्यले विचारधारा ? यो बहस यसकारण हुन्छ किनभने लेखनको टाउकोमा दुवैथरीको अनुहार छ ।
चल्तीका विचारधारामा साहित्य लेख्ने हो कि साहित्य लेखेर विचारधारा जन्माउने हो ? यो बहसको अन्त्य छैन । कवि राजा पुनियानीको इको कवितासंग्रह ‘तङसिङ’ बजारमा आएसँगै यो बहस पनि सतहमा छ । विश्वभरि अहिले इको एक्टिभिस्टहरू एउटै बहसमा छन्– क्लाइमेट चेन्ज कि क्लाइमेट क्राइसिस ? पृथ्वीमा घाउचोट पार्ने कि त्यो घाउचोटबाट निस्किरहेको रगत बुच्याउने ?
स्पष्ट छ, राजाले पनि चल्तीको डिस्कोर्स कवितामा हुलेका छन् । साहित्यमा पर्यावरणलाई गम्भीर लिने लेखकहरू छन्/छैनन् मलाई थाहा छैन, तर यो साहित्यमा अछुत विषय त हो नै । राजा पुनियानीको तङसिङले विज्ञानको अनुशासनमा पर्ने ‘पर्यावरण’ साहित्यको अनुशासन पनि हो भनेर दाबी गरेको छ । केही वर्षअघि फुच्ची ग्रेटा थनवर्गले विश्व थर्काइन् । विश्वभरका नेताहरूलाई ताकेर भनिन्, ‘इको सिस्टम कोल्याप्स हुँदै छ । विश्व ठूलो नरसंहारको नजिक छ । तिमीहरू पैसा र आन्तरिक आर्थिक वृद्धिको कथा मात्र सुनाइरहेका छौ । किन पृथ्वीको सुर्ता छैन तिमीहरूलाई ?’ केही वर्षपछि राजा पुनियानी सुनाइरहेछन्– पृथ्वीलाई प्लास्टिकको झोलामा हालेर कता जाँदै छौ तिमी ? थनवर्ग र पुनियानीको सुर्ताको कथ्य एकै हुन्, कथानक फरक हो । जलवायु परिवर्तन, प्रकृति दोहन वैज्ञानिक र एक्टिभिस्ट वृत्तमा चलिरहेको वैश्विक ‘हट टपिक’ हो । कवि राजा पुनियानीले त्यसलाई कवितामार्फत बहसमा ल्याउने दुस्साहस गरेका छन् । तङसिङ आजको समयको प्रमुख संकटमाथि बहस गरिरहेको महत्त्वपूर्ण काव्य–किताब हो ।
हाम्रोतिर खुबै चलेको र मानेको इन्द्रबहादुर राईको रहस्यवाद, आध्यात्म र आधुनिक भौतिकीबीचको सम्बन्ध खोज्नमा गरिएको यत्न जुन छ ‘लीला लेखन’, त्यो चिनियाँ ‘ताओवाद’ को नेपालीकरण मात्र हो भनेर थाहा पाउन फ्रिट्जफ काप्राको ‘द ताओ अफ फिजिक्स’ लगायत केही पुस्तक पढे भइहाल्यो । यद्यपि काप्रा र इबराका समय आ–आफ्नै सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौतिक, वैचारिक द्वन्द्वले बनेको छ । त्यसकारण ‘कथ्य’ एकै भए पनि ‘कथानक’ अलग छ । ग्रेटा थनवर्ग र राजा पुनियानीको समय के एकै सांस्कृतिक, आर्थिक, वैचारिक, राजनीतिक द्वन्द्वले बनेको छैन त ?
विश्वमा चलिरहेको इको डिस्कोर्स नेपाली कवितामा किन नआउने त ? अर्थात् राजा पुनियानीको यत्न नयाँ छैन । नयाँ छ भने नेपाली कवितामा ‘इको’ कसरी ल्याउने, त्यसको यत्न मात्र छ । अचेल बजारमा थरीथरीका विचारहरू सर्वत्र उपलब्ध छन् । तपाईं तीमध्ये एउटा उठाउनुस् र लाग्नुस् ‘प्रोजेक्ट’ मा । किनभने साहित्य अब ‘प्रोजेक्टवर्क’ बनिसक्यो । तङसिङ क्लाइमेट क्राइसिसमाथि गरिएको पोयटिक डिस्कोर्स हो । त्यो डिस्कोर्सको प्रोजेक्ट हो ।
आखिर कविता स्वतःस्फूर्त लेखिने विषय हो कि वैचारिक मन्थनपछि काव्यिक भाषा खिपेर गरिने उत्पादन हो ? यो बहस पनि नयाँ भने छैन । तङसिङको विमोचन कार्यक्रममा जाँदै गर्दा बाटोमा पर्‍यो टिस्टा । छालहरू फाल्दै बग्ने टिस्टा जमेको पोखरी बनेको थियो । पोखरीमा जस्तो त्यहाँ केही तरंगहरू थिए । उत्तारचढाव छैन भने जीवन त जीवन बन्दैन, नदीको त गहनै छालहरूको उत्तरचढाव हो । मानिस अँध्यारामा छन्, त्यसैले बिजुली चाहियो । मानिसलाई उज्यालो पार्न टिस्टाले आफूलाई बलि चढाउनुपर्ने हो त ? जमेको टिस्टा र टिस्टाको पानी छेकेर बसेको ड्याम हेर्दै गर्दा हरकोहीले सोच्लान्– अब नदीहरूको छालमा बजार पस्यो । जहाँ बजार पस्यो, त्यसले प्रकृति डस्यो ।
संवेदनशील कवि राजा पुनियानीलाई बजार, मानिस, नदी र बिजुलीबीचको सम्बन्ध थाहा नहोला त ? पर्यावरण संकटलाई अभियान पारेर एक कवि सडक ओर्लेलान्/नओर्लेलान्, तर कवि राजा कवितामा ओर्लनु स्वाभाविक हो ।
कन्नड कवि अरिफ राजाको एउटा कविता छ– चे ग्वेभारा । हस्तमैथुन गर्न ऊसित आधुनिक कुनै टुल्स छैन, उसित आफ्ना हात छन् । तर, अन्डरवेयर लगाएको छ–चे ग्वेभारा–मार्का । चेलाई तल्तिर सुल्काएर ऊ हस्तमैथुन गरिरहेछ । अर्थात् बजारले चे–विचारलाई स्खलित गरिरहेछ ।
बजारले चे ग्वेभारासमेतलाई ‘अन्डरवेयर’ बनाइसकेको समयमा तपाईंका लागि बजारले विचार ‘इम्पोर्ट’ र ‘इम्पोज’ गर्नु नौलो विषय रहेन । तपाईंलाई त्यसमध्ये आफूलाई मन परेको विचारको ‘कन्ज्युमर’ बन्ने छुट छ । भारतमा पनि अचेल यस्ता ‘फेसनेबल एक्टिभिज्म’ पर्याप्त छ, जसलाई आलोचकहरू ‘फेसनेबल यथार्थवादी’ हरूको झुन्ड भन्छन् । कवि राजा पुनियानी त्यही फेसनेबल यथार्थवादी लहरका सदस्य हुन् ? तङसिङ नपढी कसरी थाहा पाउने ? राजाको तङसिङ ‘डेब्यु’ ले बहस बजार खोज्ला । तङसिङ अहिले बजारमै छ ।
मैले झारखण्डका कवि जेसिन्ता केरकेट्टालाई सोधें, ‘कविता वैश्विक दृष्टिकोणको ‘ड्रोनिक जुम इन’ तिर छ, तिमी आदिवासी चेतदेखि बाहिर किन निस्किँदैनौ ?’ पहिले त कवि हाँसिन् । त्यसपछि भनिन्, ‘किनभने म आदिवासी हुँ । त्यही वैश्विक पर्दामा म कहाँ छु ? त्यो म आफैंले खोज्ने हो । आदिवासी चेत मेरो यथार्थ हो, स्वैरकल्पना होइन ।’
उत्तरले मलाई धेरै ठुन्का पार्‍यो । जेसिन्ताको जवाफले मै हुँ भन्ने कविहरूलाई आफ्नो ‘औकात’ त देखाउँछ नै, कवि कर्मको लोकेसन पनि देखाउँछ । भ्रममा नपरे हुन्छ ग्लोबल भन्ने थोक हुँदैन । हरेक लोकल नै ग्लोबल हो । हरेक थोपा नै समुद्र हो होइन, त्यसबारे तपाईं आफैं चिन्तन गर्नुहोला । सोइपरी मैले कवि राजा पुनियानीलाई पनि सोधें, ‘हामी त यस्सै पनि प्रकृतिको पूजा गर्ने समुदाय हौं, तिमीलाई पृथ्वी मर्छ भन्ने सुर्ता किन लागेको ?’ राजा भन्छन्, ‘किनभने म मानिस हुँ ।’
यसको मतलब साफ छ– राजा पुनियानीको कवितासंग्रह तङसिङ ‘इको क्राइसिस’ माथि बहस गर्ने काव्यिक औजार हो । हरेक युद्धले ‘क्राइसिस’ जन्माउँछ । कि त क्राइसिसले युद्ध जन्माउँछ । जे नै भए पनि युद्ध संहारक हुन्छ । हरेक संहारले विचारका प्रकृति फेर्छ । तङसिङचाहिँ पर्यावरण र मानिसबीच चलेको युद्ध हो । यो युद्धले, जुन संहार मच्याइरहेको छ, त्यसैको ‘कन्टेक्स्ट’ माथिको ‘टेस्क्ट’ हो–तङसिङ । आदिवासी र जंगल भनेको पानी र माछाजस्तो हो, राजाको काइदा हो– लिम्बू जनजातीय मुन्धुमी लय कवितामा राख्नु । तङसिङ नामैले पाठकलाई आग्रह गरेको छ, प्रकृतिको नजिक जाऊ, सम्बन्धको नजिक जाऊ, गएर हेर, प्रकृति र सम्बन्धबीचको सम्बन्धविच्छेद ।
ग्रहहरू करोडौं छन् असंख्य सौर्यमण्डलमा । करोडौं ग्रहमध्ये एउटै पृथ्वीमा मात्र प्रकृति छ, त्यसैको दोहनमा छन् मानिस । कवि राजाले ‘किनभने म मानिस हुँ’ भनेर दिएको जवाफमा त्यही प्रकृतिमाथिको मानिसको ‘उत्तरदायित्व’ छ । तङसिङको एक्टिभिज्म भनेकै मानिसमा त्यही उत्तरदायित्वको खोज हो । पृथ्वीको दुस्मन को हो ? त्यही खोज्न तङसिङ पढ्ने हो । पाठकको सहज आस्वादनको निम्ति राजाले खोजी निकालेको भाषामा लालित्य त छँदै छ, प्राकृतिक–सांस्कृतिक भाष्य पनि छ । यति हुँदाहुँदै लछेप्रै चटकहरू पनि छन् ।
कविता पढ्दा लाग्छ, कविले बरु निबन्ध लेखे हुन्थ्यो । किनभने राजाले क्लाइमेट क्राइसिसमाथि किताबमा, अखबारमा, गुगलमा पढेको, भेटेको जति सूचना, जानकारी, बहसको किस्सा, डेटा, पर्याभियन्ताहरूको ‘वर्क’ जम्मैको सन्दर्भसंग्रह बनाएका छन्– तङसिङलाई । त्यसले ‘इको पोयट्री’ लाई नै विषय पारेर लेखेको ‘पहिलो’ किताब हो भनेर चिनाउने यत्न राजाको कवितीय ‘माइन्डसेट’ हो कि भन्ने सन्देह गराउँछ । कविता लेख्न जान्नेलाई नै कवि भनिने हो । यसको अर्थ सीधा छ, कविता लेख्न ‘कवितीय चेत’ त हुनै पर्‍यो । तर, त्यो ‘कवितीय चेत’ को ‘सेन्सर’ स्वतःस्फूर्त चल्छ कि कनेपछि ? तङसिङ पढ्दै गर्दा यो प्रश्न स्वतःस्फूर्त उत्पन्न हुन्छ ।
आख्यान–कविताका नाममा धेरै कविले प्रयोग गरेकै छन्, राजाले त्यसको सिको तङसिङमा पनि गरेका छन् । केही उरन्ठ्उेला प्रयोगसँगै अन्टसन्ट किस्सा, बीचबीचमा कविता राखेर बाहिर बाँधिएका भूमिका, देखाइका पण्डित्याइँलाई सहन सक्नेहरूका लागि तङसिङ नरिवल पनि हो, जट्टा र खबटा उप्केपछि खास फलमा पुर्‍याउँछ । लामालामा कविताले बीचबीचमा आस्वादनमा ‘इरर’ गरे पनि छोटाछोटा कविताले आस्वादनको चरमोत्कर्षमा पुर्‍याउँछ । प्रकृति दोहनका सन्दर्भमा समय चेत, विषय चेत र प्रकृति चेतसहित मानिसका संवेदनामाथि प्रहार गर्न चाहिने कविताको भाषामा कवि बोलेकै छन् । तर, पछिल्तिरका पानाहरूमा जुन ‘इको विमर्श’ मा ६ जना लेखकको भूमिका र ११ जना लेखकको शुभकामना सन्देश पढ्दा लाग्छ, राजा आफ्ना बचाउका लागि सेना खडा गरिरहेका छन् । तङसिङको इको कवितामा कति ‘इको’ छ, त्यो कविताले नै भन्ने हो, विमर्शले होइन ।
प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७९ ०९:१३